मिर्गौला छिट्टै किन बिग्रन्छ? कमसल मिर्गौला लिएर किन जन्म हुन्छ? कसरी स्वस्थ राख्ने? - Nepali Sandes
काठमाडौं- विश्व मिर्गौला दिवस विश्वभर विभिन्न कार्याक्रम गर्दै मनाइँयो। नेपालमा पनि दिवसका अवसरका विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम भए । दिवसका अवसरमा स्वास्थ्यखबरको विशेष कार्यक्रम ‘स्वास्थ्य संवाद’मा बरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा ऋषिकुमार काफ्लेसँग कुराकानी गरिएको छ।
Sat-Mar-2018, 12:23 pm मा प्रकाशित, 18 जनाले हेर्नुभयो